Indlu yasekhaya Recipes Ukubhaka Cheesecakes
Abenzi beebisi bawuthanda ozithandayo ukususela ebuntwaneni. I-Cottage cheese eRussia ibizwa ngokuba yi-cheese, ngoko ke igama elithi "amaqebelengwane ashizi". Ukudla okunandi okumnandi wethu omkhulu-ugogo-makhulu olungiselelwe kwi-yogurt. Bathabatha ibhokhwe ekhethekileyo, ewathambisa ubisi olumuncu, kwaye bafaka isitofu eshushu. I-cottage cheese eyabangela ukuba ifakwe kwisibhenge esikhethekileyo kunye ne-whey.
Olutsha "ushizi" lwaluhle kakhulu, kodwa alugcinwanga ixesha elide, nakwiindawo ezipholile. I-Cottage cheese yafakwa kwi-ovini iiyure eziyi-2-3 ukuze yome. Emva koko, yafakwa kwizimbiza zodongwe kwaye yatyulwa ngeoli. Ndiyabulela kule teknoloji, i-cottage cheese inokugcinwa ixesha elide.
Funda indlela yokulungisa kakuhle i-syrnik ekhayeni unakho umsikazi ngamnye. Uya kufuna i-cottage cheese 250 amagremu, 1 iqanda, isiqingatha sendebe yomgubo (okanye i-semolina) kunye ne-tablespoon ishukela. Thatha i-cottage cheese eyomileyo neyamafutha, ukuze "inhlama" egqityiweyo ifake umgubo ongaphantsi. Ukuba ufuna ukupheka enye i-syrniki, vela ukwandisa inani eliphindwe kabini.
Ukuze wenze i-tender yakho ye-syrniki kunye ne-airy, yeqa i-cottage ushizi ngokusebenzisa isihlunu okanye isikhonkwane. Kwisistim esiphumelayo, faka iipunipoyi ze-2 zeshukela kunye nokuxuba. Kwisitya esisodwa, shaya i-whisk (okanye i-blender) ngeqanda uze uthele kwi-cottage cheese. Ukuba uyongeza umgubo, uze uwuhluthe kwangaphambili. Xa unongeza umgubo kwi-mass mass, "oqinileyo" iya kuba yi-syrniki enhle.
Ungalibali ukufaka ityuwa encinci (kwicala lomsi) ukuze unike umdla okhethekileyo kwi syrniki yakho. Gwema ukubamba i-syrnikov kwi-pan yokutshiza kuya kunceda i-teaspoon ye-oyile yemifino, eyongezwa kwi "intlama".
Ukususela kwi-mass mass, ifom encinci "amaqebunga aswele". Fry epenjini kunye nebhotela (ingaba yintyatyambo kunye nekhilimu) ukusuka kumacala amabini ngokushisa okuphantsi. Ikhekhe elimnandi elikhethiweyo!
Ngokuqhelekileyo, i-jam, ukhilimu omuncu, ubisi oluncibilikiweyo, nayiphi na i-sauces e-sweet inikezelwa kwisitya. Ukufumana ingcamango ekhethekileyo "yokungaqhelekanga", unokwenza i-honey, yogurt, i-jam okanye ukhilimu ogwetshiwe.
Kuba ukulungiselela "syrynikov" enokwakheka kunokuncedisa i-vanillin encinci, iinqabileyo okanye iinantongomane eziqiniweyo. Iimveliso ezihlambulukileyo zihlambulukile kwaye zomiswe ngaphambi kokuba zongezwe ubunzima. I-Cottage cheese ibhetele idibene nama-walnuts kunye ne-hazelnuts. Akunconywa ukuba ungeze ama-peanuts, angonakalisa i-syrniki yakho enhle.
Ngaba wayesazi ukuba amaqebelengwane amnandi ashiyiweyo akufanele abe mnandi? Yongeza imifino, anyanisi kunye netyuwa kwi-cottage cheese. Uya kufumana i-snack yasekuqaleni.
Abacebisi bayisidlo esimangalisayo, ingcamango enokuthi inganciphise kuphela ngcamango yomntu ophethe umkhosi. Yongeza kwi-apricots eyomileyo, i-apple ecocekileyo, i-carrot okanye i-bhanana kunye nesitya esidala siyakumangalisa iindwendwe okanye intsapho yakho inomdla omtsha.
Siya kukunika ingqalelo ezininzi iindlela zokupheka zokuqala ezikhethiweyo.
I-Cheesecakes eneziqhamo zokuzalisa
Uza kufuna i-cottage cheese 250g, 1 iqanda, iipunipoyi ezi-2 zeshukela, i-5 tablespoons zomgubo, ihafu yesipuni se-vanillin, isiqingatha sesipuni sesipuni se-baking powder, ityuwa esiphantsi kwetazi kunye namajikijolo (ukhetha) ukuzaliswa, 100g.
Ukubetha iqanda nge-whisk noshukela kunye ne-vanilla. Kwisitya esinye, faka i-cottage shiese, ityuwa, i-powder baking. Thela iqanda elibetywe kwi-mass mass and add the berries. Kwi-molds yokubhaka (umzekelo, iifomfini), faka "inhlama". Bhaka kwi-oven eshushu ngaphambili (ukuya kwi-180 ° C) imizuzu engama-40, de kube i-crust ihluma.
Amacake e-curd amnandi
Uzakufuna i-cottage cheese 400g, 1 iqanda, i-1-2 tablespoons yetshukela, i-4 tablespoons yomgubo, i-20g ye-vanillin, i-cream ye-50ml, i-cognac 2 iipunipoon, ukhilimu omuncu 200g, iinqabile ezingama-100g.
Iimvumba zityhala i-cognac, shiya imizuzu engama-20. Kwisitya, xuba i-cottage ushizi, iqanda, i-vanillin, iswekile, umgubo, wongeza iidiliya. Sithatha ubuncinane obunamkeli, siyawuthululela ngomgubo, kwaye siyithumela epanini elitshisayo.
I-sauce sidibanisa ukhilimu omuncu kunye nekhefu ngokuhlukileyo, gcwalisa amaqebelengwane ashiziweyo, kwaye uyithumele ehovini imizuzu engama-20, emva kokugubungela izitya nge-lid.
I-recipe yokukhupha ikhekhe ye-cheese iyakhawuleza, iyinandi kwaye iyincedo!
I-Cheese Fruit Snake
I-cheesecake eyenziwe nge-chocolate nge-chips
I-Cheesecakes - zokupheka okumnandi ngokukhawuleza
Ukuzivocavoca kwe-Chinese gymnastics Tai Shi
Isaladi ukusuka kwiklabishi kunye namakhukhamba
Ikhalenda yokukhulelwa: iveki yesithoba
Yintoni ongayenza xa umntwana wakho elele?
Indlela yokwenza amacici omnyaka omtsha: iklasi yeklasi kwidongwe lepolymer
Yintoni eya kuba yintwasahlobo ka-2016-imbonakalo yemozulu
I-Cupcake nge yoghurt
Indlela yokwenza umntu alahleke kwaye ufuna ukukufuphi